Amaphutha ama-4 Ongawenza Ngaphandle Kommeli We-Interpol | I-Interpol UAE
Amaphutha ama-4 Ongawenza Ngaphandle Kommeli We-Interpol
I-Interpol imele iNhlangano Yamaphoyisa Obugebengu Yamazwe Ngamazwe, futhi iyinhlangano yohulumeni bamazwe angamalungu ayi-194. Lawa mazwe angamalungu asebenza ndawonye ngokwabelana nokufinyelela idatha ukuze kugcinwe umhlaba uyindawo ephephile. Ngokuvamile, lapho ulwa impi yezomthetho yamazwe ngamazwe, kufanele ubhekane nabaphikisi abakhulu kakhulu nabanamandla. Lona umsebenzi onzima kunoma ubani, kodwa unzima uma ungajwayelene nobunkimbinkimbi bomthetho wamazwe ngamazwe.
Abameli bethu be-Interpol babe namakhasimende amaningi abengazilungiselele izinselelo eziza nezimpi zomthetho zomhlaba wonke enkampanini yethu yabameli. Lokhu kuvame ukwenziwa kubi kakhulu uma bezame ukulungisa izinto bebodwa ngaphambi kokuba bahlanganyele izinsizakalo zethu.
Ukubhekana ne-Interpol kudinga izinga elijulile lesipiliyoni nobungcweti, futhi lokhu kungatholakala kuphela nommeli onguchwepheshe bomthetho wamazwe omhlaba wobugebengu. Akuwona wonke ummeli wobugebengu ongasebenza njengommeli we-Interpol. Leli ngelinye lamaphutha abantu abawenzayo lapho bebhekene nezimpi ezisemthethweni eziwela imingcele. Sikubonile lokhu kaninginingi namakhasimende eza kithi ukuthola usizo.
Kulesi sihloko, sichaza imininingwane emine ngalawa maphutha ngethemba lokuthi uzowakhumbula uma kwenzeka uzithola ulwa impi yezomthetho yomhlaba wonke. Kodwa ngaphambi kwalokho, “Yini i-Interpol?”
I-Interpol - The Inhlangano Yamazwe Ngamazwe Yezobugebengu yinhlangano yamaphoyisa yomhlaba wonke eyenzelwe ukulwa nobugebengu bamazwe omhlaba. Le nhlangano inamazwe angamalungu ayi-194, kanti indlunkulu yayo iseLyon, eFrance. Amazwe angamalungu anoxhumano olwenziwe ngokusebenzisa ukwabelana nokwabelana ngemininingwane eyenza sikwazi ukuxhumanisa imizamo yokulwa nobugebengu emingceleni yamazwe omhlaba.
Amazwe angamalungu anezivumelwano phakathi kwawo, okwenza ukuthi umuntu osolwa ngobugebengu ezweni elithile aboshwe kwelinye izwe ngalelo cala. Konke okudingekayo ukuthi izwe elibikayo lilayishe imininingwane yomuntu kunethiwekhi ye-Interpol. I-Interpol bese ikhipha isaziso kwinethiwekhi yayo ixwayisa amazwe angamalungu ngamathuba okuthi abasolwa bavikeleke ezweni labo.
Noma yiliphi izwe lapho kutholakala khona ummangalelwa, ngenxa yesivumelwano abanaso nezwe elibikayo, bese limbopha liphinde limbuyisele lowo muntu ukuze abhekane nomthetho ezweni elibikayo.
Isaziso se-Interpol yisicelo esisemthethweni somhlaba wonke sokubambisana kwamazwe angamalungu ekubambeni isigebengu. Isicelo sivame ukufakwa ohlelweni lwezomthetho lukahulumeni okhipha, futhi imininingwane ngommangalelwa ifakiwe esicelweni. Isaziso se-Interpol yithuluzi amazwe angamalungu agcina ukuhleleka ngalo emingceleni.
I-Interpol inezaziso eziyisikhombisa ezahlukene ezisetshenziselwa ukwaba imininingwane phakathi kwamalungu ayo. Kunezaziso ezibomvu, eziluhlaza okwesibhakabhaka, eziluhlaza okotshani, ezisawolintshi, eziphuzi, ezimnyama nezabantwana.
Isaziso esibomvu se-Interpol sikhishwa lapho umsolwa enecala elibucayi. Isaziso sivumela amazwe angamalungu ukuthi alandele umsolwa, amqaphe ngeso lokhozi, futhi, kuye ngokuthi izinto zihamba kanjani, ababophe kuze kube izwe labo licela ukubuyiselwa ezweni labo.
I-Interpol blue inothisi ikhishwa lapho izwe elisikhiphayo lithungatha umsolwa futhi lingazi ukuthi angatholakalaphi. Lesi saziso sibeka amazwe angamalungu esixwayiso sokuthi aqaphe abasolwa, futhi uma kutholakala kunoma yiliphi izwe, lelo zwe lazisa izwe elikhipha umsolwa ngaphakathi kwemingcele yalo.
Isaziso esiluhlaza se-Interpol sisebenza ncamashi nesaziso esibomvu, ngaphandle kokuthi sikhishelwa amacala abucayi kakhulu kunezincwadi ezigunyaza isaziso esibomvu.
Izaziso ze-Interpol orange zikhishwa lapho amazwe efuna ukuxwayisa ngabasolwa noma izehlakalo ezisongela ukuphepha komphakathi.
Izaziso eziphuzi ze-Interpol zikhishwa lapho izwe elikhiphayo lidinga usizo lwamazwe ngamazwe ekutholeni abantu abalahlekile, ngokuvamile abancane noma abantu abangakwazi ukuziveza.
Izaziso ze-Interpol Black zikhishwa ukuze kutholwe futhi kuhlonzwe abantu abashona emazweni lapho bengezona izakhamuzi.
Njengoba igama lisho, izaziso zezingane zikhishwa lapho izingane zilahlekile, futhi izwe elikhiphayo lifuna ukusesha nge-Interpol.
Amaphutha amane ajwayelekile ongawenza nge-Interpol
Miningi imibono eyiphutha edaliwe ezungeze i-Interpol, ukuthi yini abayimele nabakwenzayo. Le mibono eyiphutha idale ukuthi abantu abaningi bahlupheke ngemiphumela ababengeke babhekane nayo ukube babazi kangcono. Ezimbalwa zazo yilezi:
1. Ukuthatha ngokuthi i-Interpol iyisikhungo samazwe ngamazwe sokuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho
Yize i-Interpol iyithuluzi elisebenza kahle ekuzuzeni ukubambisana kwamazwe omhlaba ekulweni nobugebengu bamazwe omhlaba, akuyona inhlangano yezomthetho yomhlaba wonke. Esikhundleni salokho, iyinhlangano esekwe ekusizaneni phakathi kweziphathimandla zezomthetho zikazwelonke.
Konke okwenziwa yi-Interpol ukwaba imininingwane phakathi kweziphathimandla zokuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho kwamazwe angamalungu okulwa nobugebengu. I-Interpol, yona uqobo, isebenza ngokungathathi hlangothi ngokuphelele nangokuhlonipha amalungelo abantu abasolwa.
2. Ngokuthatha ngokuthi isaziso se-Interpol silingana nencwadi egunyaza ukuboshwa
Leli iphutha elejwayelekile kakhulu elenziwa ngabantu, ikakhulukazi ngesaziso esibomvu se-Interpol. Isaziso esibomvu akuyona incwadi yokuboshwa; esikhundleni salokho, imininingwane ephathelene nomuntu osolwa ngezenzo zobugebengu ezimbi kakhulu. Isaziso Esibomvu simane nje siyisicelo sokuthi abomthetho bamazwe angamalungu baqaphele, bathole futhi babambe “okwesikhashana” umuntu obekwe icala.
I-Interpol ayikwenzi ukuboshwa; yizikhungo zezomthetho zezwe lapho kutholakala khona umsolwa ezikwenzayo. Yize kunjalo, abomthetho wezwe lapho kutholakala khona umsolwa kusamele balandele inqubo efanelekile yohlelo lwabo lwezomthetho ekubambeni umsolwa. Lokho kusho ukuthi kusazokhishwa incwadi yokuboshwa ngaphambi kokuba umsolwa aboshwe.
3. Sithatha ngokuthi Isaziso Esibomvu asinasizathu futhi asinakuphikiswa
Lesi yisibili esiseduze sokukholelwa ukuthi isaziso esibomvu yisigunyaziso sokuboshwa. Imvamisa, uma kukhishwa isaziso esibomvu mayelana nomuntu, izwe lapho atholakala khona lizomisa izimpahla zakhe lihoxise nama-visa akhe. Bazolahlekelwa nanoma yimuphi umsebenzi abanawo futhi balimale nedumela labo.
Ukuqondiswa kwesaziso esibomvu akumnandi. Uma izwe lakho likhipha eyodwa ezungeze wena, ungasiphonsela inselelo isaziso. Izindlela ezingaba khona zokuphonsela inselelo iSaziso Esibomvu ziyiphonsela inselelo lapho kwephula imithetho ye-Interpol. Imithetho ifaka phakathi:
I-Interpol ayikwazi ukungenelela kunoma imuphi umsebenzi womlingiswa wezepolitiki, owezempi, owenkolo noma wezinhlanga. Ngakho-ke, uma uzwa ukuthi isaziso esibomvu sikhishwe ngokumelene nawe nganoma yisiphi sezizathu ezingenhla, kufanele ukuphonsele inselelo.
I-Interpol ayikwazi ukungenelela uma icala lesaziso esibomvu livela ekwephuleni imithetho yokuphatha noma imithethonqubo noma izingxabano ezizimele.
Ngaphandle kwalezi ezibalulwe ngenhla, kunezinye izindlela ongaphonsela ngazo inselelo iSaziso Esibomvu. Kodwa-ke, udinga ukugcina izinsizakalo zommeli wobugebengu wamazwe omhlaba ukufinyelela lezo zindlela.
4. Ngokuthatha ngokuthi noma yiliphi izwe lingakhipha Isaziso Esibomvu nganoma yisiphi isizathu elibona kufanele
Amathrendi akhombisile ukuthi amanye amazwe afanele inethiwekhi enkulu ye-Interpol ngezinhloso ezingezona ezakhiwe yinhlangano. Abantu abaningi baba yizisulu zalokhu kuhlukunyezwa, futhi amazwe abo akutholile ngoba abantu abathintekayo bebengazi kangcono.
Funa usizo lochwepheshe bese ufinyelela kubameli bethu be-Interpol e-UAE namuhla!
Abameli bethu be-Interpol ku Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) zihamba phambili e-UAE. Sibanzi ngokwanele ukukunikeza ngezinsizakalo zomthetho ozidingayo, noma ngabe icala lakho likhulu kangakanani, futhi lincane ngokwanele ukukunaka ngendlela oyifanele.
I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) yiqembu lochwepheshe, abathathwa njengochwepheshe emkhakheni wabo. Sinolwazi olunzulu kanye neminyaka yesipiliyoni sokuphatha Izaziso ze-Interpol e-UAE.
Uma ufuna abameli be-Interpol e-UAE, abanamakhono kakhulu, abanaka izidingo zakho futhi balalela okukukhathazayo, lapho-ke uze endaweni efanele. Sizibophezele ekuhlinzekeni insizakalo yezomthetho ehamba phambili kuwo wonke amaklayenti ethu futhi sizokwenza umzamo wokuhlangabezana nezidingo zakho.
Yini enye? Singochwepheshe emthethweni wamacala obugebengu wamazwe omhlaba futhi sazi konke okuphathelene nokubhekana nezindaba ze-Interpol. Finyelela namuhla ukuze bhuka i-aphoyintimenti nathi.